Makà famerenana maimaim-poana ny bilaoginao na tranokala | Martech Zone
Makà famerenana maimaim-poana ny bilaoginao na tranokala
Talata, Septambra 7, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Nametraka ezaka betsaka tamin'ny tranokalanao ianao na bilaogy orinasa, tonga ny fotoana hanarenana azy. Nanoratra Corporate Blogging ho an'ny Dummies izahay hanampiana ireo orinasa hampiasa bilaogy hananganana fahefana sy hahazoana fitarihana amin'ny Internet. Na dia mifantoka amin'ny sehatra fitorahana bilaogy sy bilaogy aza ilay boky, ireo teôria dia miitatra amin'ny tranokalan'ny orinasam-pandraharahana hatrany amin'ny pejy fipetrahana pay-per-click.
Betsaka aminareo no efa nanomboka namaky ilay boky ary nahafaly ny valiny. Fantatray fa manana mpivarotra lafo indrindra izahay - saingy tsy fantatray ny halehiben'ny boky horaisina. Ny olona sasany dia nanoratra manokana ary mampahafantatra anay fa ny fifamoivoizany sy ny fiovam-pony dia efa ao amin'ny bilaogin'izy ireo ao anatin'ny herinandro maromaro amin'ny famoahana ireo paikady sasany. Mahatalanjona!
Ny mbola tsy hitantsika tamin'io fotoana io dia ny famerenana Amazon, Sisintany, Barnes sy Noble, Goodreads, Shelfari, ary lakaoly.
Raha mandinika ny boky an-tserasera ianao dia hanao fanadihadihana momba ny tranokalanao na bilaoginao ary hanome anao valiny mahasoa momba ny famolavolana, ny fanatsarana ny motera fikarohana, ny fanatsarana ny fiovam-po ary ny fiantraikany amin'ny ankapobeny. Izahay koa aza soraty amin'ny lahatsoratra izany ary hazavao amin'ny mpamaky izay ataonao. Izahay dia nanao an'ity bilaogy ity taloha ary niantso azy hoe "Blog Tipping"… ary nanao lahatsoratra tsara ry zareo!
Ny fitsipika tokana dia ianao tsy maintsy namaky Corporate Blogging for Dummies ary tsy maintsy mandefa ny rohy amin'ny famerenana amin'ny hevitr'ity lahatsoratra ity. Raha vantany vao manao izany ianao dia hanomboka. Raha mametraka asa ao anatin'ny fanadihadinanao ianao dia hametraka asa ho anao izahay!
Tags: rahona computingtantarafanadihadiana amin'ny boatyfahitana findaymiverina lalan-kafafoko
Sep 11, 2010 ao amin'ny 1: PM PM
Salama ry zalahy, faly mahita anao ao amin'ny Blog Indiana ary misaotra anao nitondra rano Vitamina ho ahy. Vao miditra ao amin'ilay boky aho, ary izany rehetra izany dia nampanantenainy.